मेरो उम्मेदवारी गुटबन्दीविरुद्ध हो
Monday, 23 August 2010 06:59	नागरिक
७५ वर्षीय भीमबहादुर तामाङको कांग्रेसमा पाँच दसक लामो लगानी छ। सुकी सदस्य लिएर २०१४ सालमा पार्टी प्रवेश गरेका तामाङले २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कुपछि सुवर्णशमशेरले चलाएको सशस्त्र क्रान्ति र २०२८ सालमा बिपीको आह्वानमा भएको क्रान्तिमा बन्दुक बोकेर होमिएका थिए। २०३६ र २०४६ को आन्दोलनमा सक्रिय तामाङ २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सडकमा आएका थोरै वृद्ध नेतामा पर्छन्।
बिपी कोइरालासँगै लामो समय भारत निर्वासनमा रहेका तामाङ २०३६ सालको जनमतसंग्रहअघि नेपाल फर्किएका हुन्।
दोलखा, जफेमा सन् १९३५ मा जन्मेका तामाङले प्रारम्मिक शिक्षा दार्जिलिङमा पूरा गरे। बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मूल सिद्धान्त मान्ने उनी व्यवहारमा गान्धीवादी मानिन्छन्। उनको सादा जीवन, सरल र पारदर्शी जीवनशैली कांग्रेसवृत्तमै नमुनाका रूपमा लिइन्छ।
कर्मशील तामाङ बगैंचा हेरचाहमा रुचि राख्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले उपलब्ध गराएको घरमा रहेका उनी बगैंचामा धेरै समय बिताउँछन्। उनी अंग्रेजी साहित्य रुचि राख्छन्। यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक मत राख्दै आए पनि कोइराला परिवारनिकट उनी सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर पहिलोपटक संस्थापन वृत्तबाट बाहिरिएका हुन्।
सभापतिमा तपाईंको उम्मेदवारी किन?
- एकीकरणपछि पनि कांग्रेस गुटबन्दीबाट मुक्त हुन सकेन। पार्टीमा रहेको चरम गुटबन्दीबाट बचाउने जिम्मेवारी लिन र विश्वासको वातावरण बनाउन उम्मेदवारी दिएको हुँ। स्थापनाकालमै बिपीले कांग्रेसलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। पार्टीलाई समावेशी बनाउने पनि उनको चाहना थियो। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न र नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा आधारभूत धरातल तयार गर्न उम्मेदवारी दिएका हौँ। कांग्रेसलाई वैचारिक शून्यताबाट मुक्त गर्न, संरचनागत परिवर्तन र मूल्य-मान्यताको राजनीतिका आधारमा पार्टीलाई एकीकृत पार्न मैदानमा आएका छौँ।
अचानक उम्मेदवारी घोषणा भयो नि?
- होइन। तयारीका साथ भएको हो। बालकृष्ण समको 'नियमित आकस्मिकता' भनेजस्तै परिस्थितिको बोधले उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको हो।
कहिलेदेखिको तयारी हो?
- साथीहरूसँग लामो छलफल र परामर्शपछि उम्मेदवारी दिएको हुँ। कांग्रेसमा पुराना दुई धार देखापरे। 'नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी' भनेझैँ प्रजातान्त्रिक पक्ष र संस्थापन पक्ष भन्दै चुनावमा उत्रिएका छन्, पार्टीका निम्ति यसभन्दा दुःखको कुरा अरू हँुदैन। हामी चाहन्छौँ, कांग्रेसलाई गुटबन्दीलाई समाप्त पार्न आवश्यक छ। कांग्रेसलाई काग्रेस भन्न मिल्ने खालको बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
गुटबन्दी कसरी समाप्त पार्नुहुन्छ?
- हामी अठोटसहित लागेका छौँ। साथीहरूले साथ दिनेछन् भन्ने विश्वास छ। पार्टीमा गुटबन्दी होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। गुटविरुद्धको अभियान कांग्रेसजनको भावनाअनुरूप थालिएको हो। यो कांग्रेसलाई सुधार्ने कोसेढुंगा हो।
तपाइंहरूका कार्यक्रम के के छन् ?
हामी कार्यक्रमसहित घोषणापत्र चाँडै सार्वजनिक गर्छौँ। मूल रूपमा कांग्रेसलाई सहरमुखीबाट ग्रामीणमुखी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो।
तपाईंको प्यानलमा को-को छन्?
- प्यानल हुँदैन। महामन्त्रीमा नरहरि आचार्यले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यत्ति हो। सबैले सहयोग गर्छन् भन्ने लाग्छ। हाम्रो उम्मेदवारी घोषणापछि पूरै पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ।
जित्ने आधार के के हुन्?
- पार्टीभित्र मूल्य-मान्यता ह्रास भएको छ। यसअघि मूल्यमान्यताको राजनीति शैलजा आचार्यले सुरु गर्नुभएको थियो। देशभरि क्रियाशील सदस्य र स्थानीय अधिवेशनले आशा र उत्साह जगाएको छ। त्यसलाई उजागर गर्ने उद्देश्यसाथ लड्दैछौँ। प्रस्तुति : विश्वमणि पोखरेल
His birth land is not japhe, his birthland is dolakha jhule vdc ward no 7...........
BIMAL TAMANG UAE
Itsagreat step, ati ramro. he deserves !! Wishing him in advance....